အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၁၇ ကြမ်မြောက် အမေရိကန် ကွန်ဂရက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်ဂရက် ၏
ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ (၂၀၂၁-၀၁-၀၃)
နန်စီ ပလိုစီ (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (D))
၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၃ ကတည်းက
Steny Hoyer (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (D))
Kevin McCarthy (ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ (R))
Jim Clyburn (ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (D))
Steve Scalise (ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ (R))
Don Young (ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ (R))
၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၅ ကတည်းက
မဲပေးခွင့်ရှိသူ အမတ် ၄၃၅ ဦး
မဲပေးခွင့်မရှိသူ အမတ် ၆ ဦး
လူများစုပါတီအတွင် ၂၁၈ ဦး
Plurality voting၊ ပြည်နယ် (၄၆) ခု၊[မှတ်စု ၁]
၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၃
၂၀၂၂ နိုဝင်ဘာ ၈
ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များ (သို့) မဲဆန္ဒနယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် ကော်မရှင် (သို့) ပြည်နယ်အလိုက် ကွဲပြားမှုများ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော် (အင်္ဂလိပ်: The United States House of Representatives) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြုလွှတ်တော် (ကွန်ဂရက်) မှ အောက်လွှတ်တော်ဖြစ်၍ အထက်လွှတ်တော်မှာ ဆီးနိတ် (/ဆဲနစ်တ်, ဆဲနာ့တ်/) ဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်အနက်မှာ "ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ၏ လွှတ်တော်" ဖြစ်လေသည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖြင့် ဥပဒေပြုသောစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။
ဤအောက်လွှတ်တော်ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ (၁) ကပြဋ္ဌာန်းပေးထားသည်။ အောက်လွှတ်တော်ကို နိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်တစ်ခုခြင်းအလိုက် ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားသော ကွန်ဂရက်မဲဆန္ဒနယ်များမှ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ (representatives) တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား၍ လူဦးရေပေါ်တွင် မဲဆန္ဒနယ်ကို အခြေခံသတ်မှတ်ကြသည်။ မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုတွင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးရှိပြီး ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး အနည်းဆုံးရှိနေရမည်။ ၁၇၈၉ လွှတ်တော်စတင်ကျင့်သုံးချိန်ကတည်းက ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်။ လွှတ်တော်တွင် မဲပေူပိုင်ခွင့်ရှိသော ကိုယ်စားလှယ်ကို ဥပဒေအရ ၄၃၅ ဦးဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ DC Admission Act (ထပ်မံဝင်ခွင်ပြု အက်ဥပဒေ) ကိုသာ ထုတ်ပြန်မည်ဆိုလျှင် အရေအတွက်မှာ ၄၃၆ ဦး ဖြစ်လာမည်။ ထို့အပြင် လက်ရှိ၌ မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိသော ကိုယ်စားလှယ်အမတ် ခြောက်ဦးရှိ၍ စုစုပေါင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှာ ၄၄၁ ရှိသည်။ (သို့) လစ်လပ်နေရာရှိပါက ပို၍ နည်းနိုင်သည်။ ၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်အရ ကိုယ်စားလှယ်အများဆုံးရှိသည့် ပြည်နယ်မှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖြစ်၍ ၅၃ ဦး ရှိလေသည်။ ပြည်နယ်ခုနစ်ခုတွင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီသာရှိ၍ ၎င်းတို့မှာ အလက်စကာပြည်နယ်၊ ဒယ်လာဝဲပြည်နယ်၊ မွန်တားနားပြည်နယ်၊ မြောက်ဒါကိုတာပြည်နယ်၊ တောင်ဒါကိုတာပြည်နယ်၊ ဗားမောင့်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းယိုမင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ကြသည်။
အောက်လွှတ်တော်သည် ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုခြင်းများကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရာ ဥပဒေကြမ်း (bill) များကို ထုတ်ပြန်ပေး၍ ထို့နောက် အထက်လွှတ်တော် ဆီးနိတ်၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် သမ္မတဆီသို့ တင်ပြကြသည်။ အောက်လွှတ်တော်တွင် သီးသန့်အခွင့်အာဏာများရှိကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ အခွန်ဘဏ္ဍာဥပဒေကြမ်းများကိုညစတင်ခြင်း၊ ပြည်ထောင်စု အရာရှိများကို တာဝန်မှဖယ်ရှားခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ (Electoral College) တွင် အများစုမဲကို သမ္မတလောင်းနှစ်ဦး၌ မည်သူမျှ မရရှိပါက သမ္မတကို ရွေးကောက်နိုင်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု_ကာပီတယ်လ်အဆောက်အအုံ၏ တောင်ဘက်ဆောင်သည် အောက်လွှတ်တော်၏ တည်နေရာဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်နာယကကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြပြီး ပုံမှန်မှာ အများစုအနိုင်ရပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ နာယကနှင့် အခြားဆွေးနွေးပွဲ/အစည်းအဝေး ခေါင်းဆောင်များကို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ သီးသန့်အဖွဲ့ငယ် (သို့) ရစ်ပါဘလစ်ကန်ပါတီ ညီလာခံတို့က မည်သည့်ပါတီသည် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် ရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်ကြလေသည်။
↑ H.R.51 - Washington, D.C. Admission Act (September 8, 2020)။
↑ Determining Apportionment။ “The total membership of the House of Representatives is 441 Members. There are 435 Representatives from the 50 states. In addition, five, non-voting Delegates represent the District of Columbia and the U.S. territories of Guam, the U.S. Virgin Islands, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and American Samoa. A non-voting Resident Commissioner, servingafour-year term, represents the Commonwealth of Puerto Rico.”
↑ United States House of Representatives Archived June 24, 2018, at the Wayback Machine., Ballotpedia. Accessed November 23, 2016. "There are seven states with only one representative: Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont and Wyoming."
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု_အောက်လွှတ်တော်&oldid=670808" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။